Orinasa sy mpanamboatra Pad Mat Anti-Slip Pad China | SJJ
Anti-slip pad na tsihy dia afaka mitazona ny findainao, ny solomaso, ny fanalahidy ary ny fanananao amin'ny dashboard anao fa tsy mihetsika rehefa mitondra fiara ianao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa azy ao an-dakozia, fidianao ary birao hitandrina ny zava-drehetra. Fanomezana tsara ho an'ny fampiroboroboana, premium, doka, fahatsiarovana ...
Anti-slip pad na tsihy dia afaka mitazona ny findainao, ny solomaso, ny fanalahidy ary ny fanananao amin'ny dashboard anao fa tsy mihetsika rehefa mitondra fiara ianao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa azy ao an-dakozia, fidianao ary birao hitandrina ny zava-drehetra. Fanomezana mety indrindra ho an'ny fampiroboroboana, premium, dokam-barotra, fahatsiarovana, kojakoja ho an'ny fiara ary firavaka. Izy io koa dia azo ampiasaina ho coaster na debris pad ao an-trano, birao, na sekoly.
Vita amin'ny Pu Gel tsy misy poizina, tsy misy fofona ary PVC malefaka, tsy ho simba sy tapaka
Miaraka amin'ny absorbability mahery vaika, anti-slip ary shockproof
Mora ampiasaina, tsy mila adhesive na magnet
Azo ampiasaina, azo esorina, azo esorina ary azo entina
Teo aloha: Mijoro finday sy mpihazona karatra
Manaraka: Tady miverina amin'ny telefaona